Turkiga iyo Ruushka oo heshiis ka gaaray xaaladda Suuriya - BANDHIGA
Madaxweynaha Turkiga Tayyib Erdogan iyo dhiggiisa Raashka Vladimir Putin oo maalinkii shalay ku kulmay magaalada Sochi ee dalka Ruushka ayaa qodobo ka soo saaray wada hadlkoodii la xariiray xaaladda dalka Siiriya.
Dowladaha Turkiga iyo Ruushka ayaa si gaar ah uga hadlay hawlgalka Turkiga ka wado Waqooyiga Siiriya iyo xoogaga Kurdida ee halkaasi ka dagaalamaya.
Qodobada ay ku heshiiyeen waxaa kamid ah:
*In xabad joojinta lagu daro 150 saac
*In kooxaha Kurdida Hubeysan ee YPG ay xiligaasi isaga baxaan dhulka ku dhaw xaduuda dalka Turkiga
*In Ciidamada Turkida iyo Ruushka si wadajir ah roondo ugu maraan dhulka xaduuda saaran, isla markaana xaqiijiyaan amniga deegaankaas.
*In la soo afjaro hawlgalka Ciidamada Turkida ee ku sugan Siiriya marka ay kooxaha kurdida baneeyaan dhulka ay Turkida codsadeen in laga saaro xoogaga hubeysan oo gudaha ugu jira Siiriya 30km
Madaxweynaha Turkiga waxaa uu sheegay in marka la sugo amniga dhulka xaduuda saaran ay bilaabi doonaan inay deegaankaasi soo dajiyaan Qaxootiga gaaraya in ka badan 3 milyan ee reer Siiriya oo hada ku sugan wadanka Turkiga.
Kooxaha Kurdida qaarkood ayaa weli diidan inay ka baxaan dhulkooda iyagoo sheegay in Turkiga uu doonayo inuu beddalo shacabka ku dhaqan goballadaasi oo uu qorshahooda yahay inay Kurdida ka suulliyaan dhulkooda waqooyiga Siiriya.
Arrintaas ayay sheegeen in ay tahay mid aynaan aqbali karaynin.
Masar oo si adag uga jawaabtay hanjabaaddii Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya
Somaliland oo shaacisay dalal DFS u soo diraya Hub(Akhriso)